Ramos iyo Ronaldo oo caawa samayn kara Rikoor haddii ay gool ka dhaliyaan Juventus – Gool FM
(Cardiff) 03 Juunyo 2017 Cristiano Ronaldo iyo Sergio Ramos ayaa caawa qarka u saaran inay gaaraan rikoor aan wali horay uga dhicin koobka horyaalada yurub.
Haddii labadaan laacib ay gool ka dhaliyaan kulanka caawa, waxay noqon doonaan ciyaaryahankii ugu horeeyay ee 3-Final oo Champions League ah ka dhaliya gool.
Ronaldo ayaa gool ka dhaliyay Final-kii Champions League ee 2008, sidoo kale wuxuu shabaqa soo taabtay finalkii 2014, wuxuuna u baahanyahay inuu caawa dhaliyo gool si uu u noqdo laacibkii ugu horeeyay ee 3-Final gool ka dhaliya koobka horyaalada yurub.
Sidoo kale Ramos ayaa lamid ah Ronaldo oo wuxuu goolal ka dhaliyay finaladii 2014 iyo 2016, wuxuuna u baahanyahay inuu gool dhaliyo caawa si uu u noqdo laacibkii ugu horeeyay ee gool ka dhaliya 3-Final oo Champions League.
Wali kama dhicin taariikhda Champions League laacib gool ka dhaliyay 3-Final oo kala duwan, Ronaldo iyo Ramos ayaana caawa fursad u haysta inay magacooda ku diiwaan galiyaan haddii ay dhaliyaan gool.
Ma ogtahay in Buffon uu doonayay inuu waayihiisa ciyaareed ka dheelo weerarka....(Yaa ku dhaliyay inuu goolhaye noqdo?)